၂၀၁၅ | 2015 ၏စာမျက်နှာ3| NAB သတင်းများ | 404 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 (စာမျက်နှာ 3)
Sizzle ဗီဒီယို Editor ကို
ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကိုစတူဒီယိုတည်နေရာ: Los Angeles မြို့, CA အမေရိကန် Sizzle ကဗီဒီယိုအယ်ဒီတာ။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, ကြော်ငြာ, တီဗီအစက်အပြောက်အပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီအယ်ဒီတာဦးစားပေး။ ကျနော်တို့အယ်ဒီတာ 12 / 22-12 / 24 အောက်ပါ၏အပတ်ကစတင်ချင်ပါတယ် ... နောက်ထပ် >>
Sinclair အသံလွှင့်အုပ်စုတည်နေရာ: Boise ID ကိုအမေရိကန်ဒါကတစ်ဦးချင်းစီဗီဒီယို, အသံဖိုင်နှင့် server ကိုအပါအဝင်ရုပ်မြင်သံကြားအသံလွှင့်သူနဲ့ဆက်စပ်သည်အခြားကိရိယာများကို install နှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့အတွက်တာဝန်ယူပါလိမ့်မည် ... နောက်ထပ် >>
CBT Automotive ကွန်ယက်တည်နေရာ: အတ္တလန်တာ GA အမေရိကန်ဗီဒီယို Editor ကို - CBT Automotive ကွန်ယက် - အတ္တလန်တာ, ဂျော်ဂျီယာ။ နေ့ကိုဖွင့်အစို့အဘို့သင့်လျော်သောလုပ်ဆောင်ချက်ကိုသေချာစေရန်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ troubleshoot ... ။ more >>
ထုတ်လုပ်သူဒါရိုက်တာ / ဓာတ်ပုံသတင်းထောက်တစ်ဦး
ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်, စန်တာဘာဘရာတည်နေရာ: စန်တာဘာဘရာ, CA အမေရိကန်ကို Adobe ထုတ်လုပ်မှု Suite ဆော့ဖ်ဝဲကို (ပရီးမီးယားလိဂ်, အကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက် Encore, စာရင်းစစ်, Photoshop ကို, Illustrator, မီဒီယာကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ) ... ။ more >>
ဗီဒီယိုကိုထုတ်လုပ်သူ / ဒါရိုက်တာ
Engility ကော်ပိုရေးရှင်းတည်နေရာ:6နှစ်ပေါင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗီဒီယိုအားထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံ Chantilly VA သို့အမေရိကန်အနည်းဆုံး။ အဆိုပါဗီဒီယိုထုတ်လုပ်သူ / သေနတ်သမား / Editor ကို >> ပို ... High-end ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဗီဒီယိုနှင့်မာလ်တီမီဒီယာပညာရှင်များဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်
ဗီဒီယိုကိုထုတ်လုပ်မှု / ဇာတ်လမ်းတွေကိုဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ International
ပန်အမေရိကန်ဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်းတည်နေရာ: ဝါရှင်တန်ဒီစီအမေရိကန်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်း, post ကိုထုတ်လုပ်မှု :. ထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးတည်းဖြတ်ရေးနဲ့ post ထုတ်လုပ်မှု။ ဒီဇိုင်းနှင့်ဆွဲဆောင်မှုကောင်းစွာသုတေသနပြုဗီဒီယိုများနဲ့ animations တွေကိုဖန်တီး ... ။ more >>
အားကစားဒါရိုက်တာ / ထုတ်လုပ်သူ
Tribune, မီဒီယာကုမ္ပဏီတည်နေရာ: ဗီဒီယိုရိုက်ကူးဖို့ Milwaukee WI အမေရိကန်အဆိုပါစွမ်းရည်ကိုလည်းပေါင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့တိုက်ရိုက်လွှ, ဆွဲဆောင်မှုအားကစားပွဲများကိုဖန်တီးရန်ချစ်သောသူတစ်ဦးပြောင်းလဲနေသောတစ်ဦးချင်းစီကိုရှာဖွေနေခြင်းနှင့် ... နောက်ထပ် >> နေ
ဗီဒီယိုကိုထုတ်လုပ်သူ / Editor ကို (စေတနာ့ဝန်ထမ်း)
တစ်ဦးကလေးတည်နေရာတစ်ဦးစာအုပ် Give: New York ကနယူးယော့အမေရိကန်ကျနော်တို့ကဗီဒီယိုတည်းဖြတ်နှင့်ခေတ္တစီမံကိန်းရှင်းပြပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗွီဒီယိုအတိုကိုဖန်တီးရန်ကာတွန်းနှင့်အတူပါရမီတစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာဖွေနေကြသည် ... ။ more >>
3 ၏စာမျက်နှာ 404«12345 » 102030...နောက်ဆုံး»